UK Visa Information - Central Language School, Cambridge
Zvichienderana nenyika yako uye kwenguva yakareba sei yaunoda kuuya kuUK, unofanirwa kunyorera vhiza. Kwekugara kusvika kumwedzi mitanhatu ndeyeVashanyi Vanoshanyira Visa, uye yekugara kwemwedzi mitanhatu kusvika kumakumi matanhatu, Visa-Pfupi Yekudzidza Visa. Ndokumbira utarise izvi pa UK Hurumende webhusaiti www.gov.uk/apply-uk-visa kwaunogona kuziva kana iwe uchida vhiza, uye iwe unogona zvakare kunyorera online. Takatsvaga saiti ino uye, kunyangwe isu tisina kukodzera kupa rairo yezvemitemo, tinonzwisisa kuti kana uchida kunyorera vhiza unofanirwa kunge uine magwaro akakodzera anosanganisira
Tsamba Yenyu Yokugamuchira iyo inotsigira kuti iwe wakagamuchirwa kwenguva uye wakabhadhara mari yako. Tsamba yacho ichapawo ruzivo pamusoro penyaya.
Uchapupu hwekuratidza kuti une mari inokwana kubhadhara kuti ugare kuUK.
Kana usiri kubudirira kuwana vhiza ndapota titumire kopi fomu rekuramba vhiza uye isu ticharonga kudzorera mari inobhadharwa. Isu tinodzosera mari dzese kunze kweimwe kosi yevhiki imwe uye mari yekugara kubhadhara mari yekutonga.